Nagarik Shukrabar - यौनाङ्ग किन देखाउँछन् ?
शुक्रबार, ०८ चैत २०७५, ११ : १३
यौनाङ्ग किन देखाउँछन् ?
शुक्रबार, ११ साउन २०७५, ०६ : १६ | शुक्रवार
यौन अंग विपरीत लिङ्गीहरुलाई देखाउने कस्तो समस्या हो ? यस प्रकारको समस्या के कारणले हुने गर्दछ । समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् ?
यौनाङ्गको प्रदर्शनले व्यक्तिलाई यौन आकर्षणको संकेत सञ्चार गर्छ । कसैले यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्दछ भने उसले यौन इच्छा मेटाउनका लागि स्वागत गरेको पनि हुन सक्छ । यौनाङ्ग देखाएर आफैँ पनि यौन आनन्दानुभूतिसमेत लिन सक्छ ।
यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्नु यौन सञ्चारको माध्यम पनि हो । स्तन वा यौनाङ्ग देखाएर हेर्ने र देखाउने (हेराउने) दुवैले यौनको सञ्चार गर्न सक्छन् । यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्नु यौन इच्छाको संकेतसमेत हो । आफ्नो यौन चाहना बुझाउनका लगि पनि यौनाङ्ग प्रदर्शन गरेका हुन्छन् ।
अंग प्रदर्शन गरेर यौन आनन्द लिने—दिने भन्दा पनि अरूलाई अकर्षण गरी यौन अनुभूति लिनेदिने दुवै कार्य हो । यो महिला–पुरुष दुवैमा हुन्छ ।
पुरुषले पनि महिलालाई यौनाङ्ग देखाएर आकर्षित गर्छन् भने महिलाले पनि पुरुषलाई यौनाङ्ग देखाएर आकर्षित गर्छन् । हाम्रो जस्तो बन्द समाजमा महिलाभन्दा पुरुषहरु बढी योनाङ्गको विज्ञापन गर्छन् ।
कतिपय पुरुषहरु छाति खुला राखेर छातिका राैं समेत देखाएका हुन्छन् । महिलालाई लोभ्याउन पनि त्यसरी पुरुष छाति देखाउँछन् ।
महिलाले पुरुषको र पुरुषले महिलाको यौनाङ्ग देखाउनु तथा हेर्नु अनुचित हैन । यौनाङ्ग देखाउनु तथा हेर्नु कति उचित हो भन्ने कुरा व्यक्तिगत इच्छा—आकांक्षामा भर पर्छ ।
कतिपय महिलाले यौनाङ्ग देखिने गरी लुगा लगाएका हुन्छन् । महिलाले यौनाङ्ग देखाएर यौना अनन्द लिन सक्छन् । कतिपय मानिसको यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्ने बानी नै हुन्छ । बाटोमा हिँड्दा, सवारी साधनमा हिँड्दा महिलाले स्तन लगायत शरीरका अंगप्रत्यङ्ग देखाउनु पुरुषलाई आकर्षित गर्नु पनि हो ।
महिलाको हकमा स्तन सौन्दर्य समेत हो । बच्चालाई स्तनपान गराउन मात्रै हैन सौन्दर्यताको हिसाबले समेत महत्वपूर्ण छ । यौन दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ । महिलाको स्तन हेरेर पुरुष पनि आकर्षित हुन्छन् । लोभिन्छन् । महिलाले विशेष प्रकृतिको ब्रा लगाएर, सर्जरी गर्ने लगायत गरेर पनि स्तन ठूलो देखाएका हुन्छन् ।
यौन असन्तुष्टिले ल्याउने विचलनले समेत केहीले सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउने गर्छन् । यौनप्रतिको कुण्ठाले समेत यस्तो समस्या ल्याउँछ ।
यो महिला र पुरुष दुवैमा देखिन्छन् । यौन इच्छा गुम्साएर राख्नु, उमेर पुगे पनि यौन आनन्द लिने अवसर नपाउनुजस्ता अवस्थाले समेत कसै–कसैमा यस्तो बानीको विकास गरेको देखिन्छ ।
जहाँ पायो त्यहीँ यौनाङ्ग देखाउने कसैको बानी छ भने उसलाई चिकित्सककोमा परामर्शका लागि लैजानुपर्छ । यौन कुण्ठाले उसमा मानसिक समस्या ल्याएको हुनसक्छ ।
कण्डम किन्न केको लाज ?
कण्डम केवल यौन मनोरञ्जनका लागि मात्रै प्रयोग हुने साधन हैन, यो गम्भीर रोगबाट जोगाउने साधन पनि हो । तर यो पनि स्वास्थ्यका अन्य साधन जस्तै हो भन्ने सोचको विस्तार हुन नसक्दा कण्डम शब्दै उच्चारण गर्न अधिकांश अझै हिच्किचाउँछन् ।
फलफूल खाँदा तन्नेरी,खाली पेटमा खानु बेठिक
जतिखेरसुकै फलफूल खान सकिने भए पनि चिसोमा भने फलफूल नखानु नै उपयुक्त हुन्छ । बिहान खाली पेटमा चिसोमा फलफूल खाँदा चिसोले फलफूल पचाउन कठिन हुन्छ
सुतेकै बेला यसरी जान्छ ज्यान
बाहिरबाट हेर्दा कुनै समस्या नदेखिए पनि मुटुमा हुने समस्याका कारण यसरी अचानक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।